Mahagaga ny fitiavan'Andriamanitra - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2016-04 mpandimby ny Magazine > Mahagaga ny fitiavan'Andriamanitra
Na dia vao 12 taona monja aza aho tamin'izay fotoana izay dia mbola tadidiko tsara ny raiko sy ny raibeko, izay tena faly tamiko satria nentiko nody daholo ny A (naoty tsara indrindra an-tsekoly) tao amin'ny tatitry ny sekoly. Ho valisoa dia nomen'ny raibeko kitapom-boankazo alligator lafo vidy aho, ary nomen'ny raiko vola 10 $ ho tahiry. Tsaroako ny fomba nilazan'izy roa hoe tia ahy izy ireo ary tsara vintana fa manana ahy ao amin'ny fianakaviany. Tsaroako koa ny fangalako farantsa avy tao amin'ny piggy bank ary nanakalo azy ireo tamin'ny vola dolara iray. Miaraka amin'ilay volavola 1 $, dia toa feno ny poketrako. Tamin'izay no nahafantarako fa hahatsapa ho toy ny milionera aho eo amin'ny fivarotana vatomamy penny.
Isaky ny manakaiky ny fetin'ny ray ny volana jona dia mieritreritra an'ireny fanomezana ireny aho (ankalazaina any amin'ny firenena maro ny fetin'ny ray amin'ny alahady fahatelo amin'ny volana jona). Miverina ny fitadidiako ary mieritreritra ny raiko sy ny raibeko ary ny fitiavan'ilay Raintsika any an-danitra aho. Fa mitohy ihany ny tantara.
Tsy herinandro akory izay no nahazoako ny kitapom-bolako sy ny volako rehefa very izy ireo. Kivy tanteraka aho! Mety ho lavo avy any an-damosiko izy ireo raha tao amin'ny sinema niaraka tamin'ny namany aho. Nizaha ny zava-drehetra aho, efa nandeha tamin'ny lalako; nefa na dia teo aza ny fitadiavana naharitra andro maromaro, ny poketra sy ny vola dia tsy hita. Na dia ankehitriny aza, taorian'ny taona 52 taona, dia mbola mahatsapa ny fanaintainan'ny fahaverezako aho - tsy manahy momba ny soatoavina ara-materialy akory aho, fa fanomezana avy amin'ny raibe sy ny raiko kosa dia tena nilaiko tamiko ary tena sarobidy amiko manokana. Mahaliana fa tsy ela dia nanjavona ilay fanaintainana, fa ny fahatsiarovana mahafinaritra ny fankasitrahana feno fitiavana nomen'ny dadabe sy raiko ahy dia nijanona teto amiko.
Raha mbola faly tamin'ny fanomezana be nataon'izy ireo aho dia ny fitiavana nasehon'ny raiko sy ny raibeko ahy no tadidiko fatratra. Moa ve tsy tian'Andriamanitra hanao toy izany koa isika - ka tokony hanaiky ny halalin'ny fitiavana tsy misy fepetra amin'ny fifaliana? Jesosy dia manampy antsika hahatakatra ny halalin'ny fitiavana an'io amin'ny fanatonana antsika akaiky kokoa azy amin'ny fanoharana momba ilay ondry very, ny denaria very ary ilay zanaka adala. Ireo fanoharana ireo dia voarakitra ao amin'ny Lioka 15 ary maneho ny fitiavana lalina ny zanany any an-danitra ho an'ny zanany. Ireo fanoharana dia manondro ilay Zanak'Andriamanitra tonga nofo (Jesosy) tonga nofo ka nitady antsika hitondra antsika mody any amin'ny Rainy. Jesosy dia tsy nanambara tamintsika ny Rainy fotsiny, fa nanambara koa ny fanirian'ilay Ray hiditra ao amin'ny fahaverezantsika ary hitondra antsika ho eo amin'ny fanatrehany feno fitiavana. Satria fitiavana madio Andriamanitra, dia tsy hitsahatra ny miantso ny anarantsika amin'ny fitiavany izy.
Izao no nilazalazan'ny poeta sy mpitendry mozika kristiana Ricardo Sanchez: Fantatry ny devoly ny anaranao, saingy miresaka anao momba ny fahotanao izy. Fantatr'Andriamanitra ny fahotanao fa miantso anao amin'ny anaranao izy. Ny feon'ny Raintsika any An-danitra dia mitondra ny Teniny (Jesosy) ho antsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ny Teny dia manameloka, mandresy ary mandefa ny ota ao amintsika (lavitra ny atsinanana amin'ny andrefana). Raha tokony hitsara antsika ny Tenin'Andriamanitra dia manambara famelan-keloka, fanekena ary fanamasinana.
Rehefa mifantoka amin'ny Tenin'Andriamanitra velona ny sofintsika (sy ny fontsika), dia afaka mahatakatra ny teny nosoratany isika, dia ny Baiboly, araka izay nokendren'Andriamanitra. - Ary ny tanjony dia ny hampita amintsika ny hafatra fitiavana izay ananany ho antsika.
Manjary mazava izany ao amin’ny Romanina toko faha-8, iray amin’ireo andalan-teny tiako indrindra ao amin’ny Baiboly. Izany dia manomboka amin’ny fanambarana hoe: “Koa tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” (Romana). 8,1). Mifarana amin’ny fampahatsiahivana mahery ny fitiavan’Andriamanitra antsika mandrakizay sy tsy misy fepetra izany: «Fa fantatro fa na fahafatesana na fiainana, na anjely, na hery, na fanapahana, na ankehitriny na ho avy, na ambony, na ambany, na inona na inona, dia tsy misy mahasaraka antsika amin’Andriamanitra. ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika » (Rom 8,38-39). Manana toky isika fa “ao amin’i Kristy” (ary azy!) Satria mandre ny feon’Andriamanitra ao amin’i Jesosy isika, izay nilaza hoe: “Ary rehefa namoaka ny ondriny rehetra Izy, dia mialoha azy, ary ny ondry manaraka azy; satria fantany ny feony. Fa tsy mba manara-dia ny vahiny izy, fa mandositra azy; fa tsy fantany ny feon’ny vahiny » (Jo 10,4-5). Mandre ny feon’ny Tompontsika isika ary manaraka azy amin’ny famakiana ny teniny sy ny fahafantarantsika fa miteny amintsika Izy. Ny famakiana ny soratra masina dia manampy antsika hahita fa mifandray amin’Andriamanitra isika satria izany no faniriany ary izany fahatokiana izany dia mitondra antsika hanakaiky kokoa Azy. Miresaka amintsika amin’ny alalan’ny Baiboly Andriamanitra mba hanomezana toky antsika ny amin’ny fitiavany amin’ny fanamarinany fa zanany malalany isika. Fantatsika fa feon’Andriamanitra io feo rentsika io. Rehefa tarihin’izy ireo isika mba hampihatra ny fiantrana ary rehefa mihamitombo hatrany ny fanetren-tena, ny fifaliana ary ny fiadanana eo amin’ny fiainantsika - dia fantatsika fa avy amin’Andriamanitra Raintsika izany rehetra izany.
Satria fantatsika fa ny Rainy any an-danitra miantso antsika amin'ny anarany ho zanany malalany, dia manosika antsika hiaina fiainana araka ny namaritan'i Paoly ny taratasiny ho an'ny fiangonana tany Kolossä:
Koa izao dia misafidy ho olom-boafidin'Andriamanitra, toy ny olo-masina sy ny olon-tiana, ny famindram-po, ny hatsaram-panahy, ny fanetren-tena, ny fahalemem-panahy, ny faharetana; ary miaritra sy mifamela heloka, raha misy mifandefitra amin'ny hafa; tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo no avelao heloka koa! Fa ambonin'izany rehetra izany dia manintona fitiavana, izay fehin'ny fahatanterahana. Ary ny fiadanan'i Kristy, izay niantsoana anao ho tena iray, dia manjaka ao am-ponareo; ary mankasitraka.
Aoka hitoetra be dia be eo aminareo ny tenin'i Kristy; amin'ny salamo sy ny fihirana fiderana ary ny hira ara-panahy no mihira amim-pankasitrahana ao am-ponareo. Ary na inona na inona ataonareo, na amin’ny teny, na amin’ny asa, dia ataovy amin’ny anaran’i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ary misaora an’Andriamanitra Ray amin’ny alalany (Kolosiana). 3,12- iray).
Amin'ny Andron'ny Ray (sy ny andro hafa rehetra), andeha asehontsika fa ny Raintsika any An-danitra dia namorona antsika hitia antsika. Amin'ny maha Raintsika be fitiavana azy, dia tiany isika handrenesana ny feony hahafahantsika miaina fiainana feno amin'ny fifandraisana akaiky aminy - amin'ny fahafantarana fa hijoro ho antsika lalandava Izy, hiaraka amintsika ary hitia antsika lalandava. Ndeha hotadidintsika foana fa ny Raintsika any An-danitra dia nanome antsika ny zavatra rehetra ao amin'i Kristy Zanany tonga nofo. Tsy toy ny kitapom-bola sy ny vola laniko very taona maro lasa izay (tsy naharitra izy ireo), ny fanomezan'Andriamanitra ho anao (ary izaho) dia eo foana. Na dia tsy mahita ny fanomezany aza ianao mandritra ny fotoana kelikely, dia eo foana ny Raintsika any An-danitra - mandondona, mitady ary mahita anao (na dia toa very ianao) mba ho fanomezana ho anao ny fitiavana tsy misy fetrany sy fitiavana tsy manam-petra hanaiky tanteraka sy hiainana.